I-Coronavirus eIndiya | I-India Visa kunye neCoronavirus | I-India Visa kwi-Intanethi kunye neCoronavirus
I-India Visa-uKuhlaziywa kweCoronavirus
Epreli 30th 2021
Icandelo loMphathiswa Wezasekhaya (MHA) ukubuyiselwa kwe-visa ye-elektroniki (e-visa) yabaphambukeli abavela kumazwe ali-156, Abazimisele ukutyelela i-India ngeenjongo zeshishini, iinkomfa, kunye nezizathu zonyango, kubandakanya imeko yezonyango. I-visa yabakhenkethi ayikabuyiselwa.
Ngomhla we-13 kaMatshi ngo-2020 -Ngokucebisa: Izithintelo zokuhamba kunye neVisa ezinxulumene ne-COVID-19
Ukucinezelwa kwazo zonke iingcebiso zangaphambili ezikhutshwe ngalo mbandela kukhutshwa izithintelo ze-visa zilandelayo ukuze zisetyenziswe.
Zonke ii-visa ezikhoyo zinikezelwe kuzwelonke zeliphina ilizwe ngaphandle kwaleyo inikezwe oonozakuzaku, amagosa, imibutho ye-UN / yeZizwe eziManyeneyo, ingqesho, ii-visa zokumiswa kweProjeki ziyema kude kube nge-15 ka-Epreli ngo-2020. Oku kuya kuqala ukusebenza nge-1200 GMT ngoMatshi 13, 2020 kwizibuko. Ukusuka kuye nawuphina umphambukeli kuhambo lwase India.
IiVisa zabo bonke abantu abavela kwamanye amazwe esele ziseIndiya zisasebenza. Banokuqhakamshelana ne-FRRO / FRO ekufutshane ngemodyuli ye-e-FRRO yokwandiswa / ukuguqulwa kwe-visa yabo okanye uncediso lwayo nayiphi na inkonzo yaseburhulumenteni ukuba bakhetha ukwenza njalo.
Indawo yokundwendwela yasimahla ye-Visa enikezwe abanini makhadi e-OCI iya kugcinwa kude kube ku-Epreli 15, 2020. Oku kuya kuqala ukusebenza nge-1200 GMT nge-Matshi 13, 2020 kwizibuko lokunduluka kwakhe nawuphi na umphambukeli kuhambo oluya e-India.
Nawuphi na umntu welizwe langaphandle onqwenela ukuya eIndiya ngezizathu ezinyanzelekileyo anganxibelelana ne-Indian Mission ekufutshane ye-visa entsha.
Bonke abahambi abangenayo, kubandakanya nabemi baseIndiya abafika bevela kuyo nayiphi na indawo abaya kuyo kwaye betyelele eTshayina, e-Itali, eIran, kwiRiphabliki yaseKorea, eFrance, eSpain naseJamani ngomhla okanye emva komhla we-15 kuFebruwari ngo-2020 baya kubekwa zodwa ithuba leentsuku ezili-14. Oku kuza kuqala ukusebenza ukusuka nge-1200 GMT ngoMatshi 13, 2020 kwizibuko lokuhamba kwabahambi.
Ukugcwala kwabantu kwilizwe lonke kwimida yomhlaba kuya kuthintelwa ekujongeni indawo zokufudukela kwiindawo ezinamakhaya ovavanyo olunamandla. Oku kuya kwaziswa ngokwahlukeneyo nguMphathiswa Wezemicimbi Yasekhaya.
Izizwe zaseIndiya ezikhoyo phesheya ziyacetyiswa ukuba zithintele ukuhamba okungabalulekanga. Ngokwenjenje bayaziswa ukuba banokuhlaliswa bodwa ithuba leentsuku ezili-14 zokufika kwabo eIndiya.
Zonke izizwe zamaIndiya zicetyiswa ngamandla ukuba zithintele konke ukuhamba okungabalulekanga kumazwe aphesheya. Ekubuyeni kwabo, banokuhlelwa bodwa ixesha leentsuku ezili-14.
Ukuhlaziywa-9 kwe-Matshi 2020
Isilumkiso: Ukuhamba kunye Visa ukulinganiselwa kuchongwe kwi-COVID-19
Zonke iiVisa eziqhelekileyo (ezinamathelayo) iiVisa / i-Visa (ukubalwa kwe-VoA yeJapan kunye noMzantsi Korea) ezivunyelwe kwizizwe zase-Itali, Iran, South Korea, Japan kwaye zanikezela kwangoko 03.03.2020 nakwabo bangekangeni kwi-India, mazimiswe . Abantu belizwe abade kangako abanakungena eIndiya ukusuka kulo naliphi na iMpawu zoMoya, uMhlaba okanye iiNdawo zokuHamba zeeSeaport. Abo bafuna ukuphuma baye eIndiya ngenxa yezizathu eziqinisekileyo, banokukhangela i-visa entsha evela kwi-Ambassia yase India
I-visa yesiqhelo (isitikha) se-Visa / i-Visa evunyelweyo kwisizwe saseRiphabhlikhi yase-China, esinikezwe ku-05.02.2020 yamiswa ngaphambili. Iya kuhlala isemandleni. Abemi baseTshayina abanjalo abanakungena eIndiya ukusuka kuwo nawuphi na umoya, uMhlaba okanye iiNdawo zokuKhangela zokuHamba eziPhakathi. Abo balindele ukuphuma baye eIndiya phantsi kweemeko ezikholisayo banokufaka isicelo sephepha lokundwendwela amaphepha kwelona lizwe likufuphi nelizwe i-India.
Ii-visa eziqhelekileyo (zesitikha) zee-visa / zee-visa ziyalelwa kulo lonke ilizwe elikude eliye zaya kwiPeoples Republic of China, Iran, Italy, South Korea naseJapan ngomhla okanye emva kwe-01.02.2020, nabangekangeni kwi-India bamisiwe. Aba bantu bangaphandle abanako ukungena eIndiya ukusuka kuwo nawuphi na umoya, uMhlaba okanye iiNdawo zokuKhangela zokuHamba eziHamba. Abo bafuna ukuphuma baye eIndiya phantsi kweemeko ezikholisayo banokufaka isicelo se-Visa entsha kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya / kwi-ofisi yobummeli.
Abameli, amagunya oMbutho weZizwe eziManyeneyo kunye namanye amaqumrhu amaZwe ngamaZwe, abanini-makhaya base-India (OCI) abanini zekhadi kunye no-Aircrew abavela kwizizwe ezingasentla ababandakanywanga kolo thintelo. Nokuba kungoko kunokuba njalo, ukuhlolwa kwabo kliniki kunyanzelekile.
Bonke abantu abakude nabamaIndiya abaya eIndiya bephuma kulo naliphi na izibuko bayacelwa ukuba bazinxibe ngendlela efanelekileyo yokuziqononondisa (ukubala amanqaku omntu ngamnye umzekelo umzekelo ngefowuni engaphezulu. Idilesi yase-India) kunye nembali yokuhamba, kumagunya ezempilo nakulawulo lokufuduka .
Abahambi (abakude nabamaIndiya) ngaphandle kwabo bavalelweyo, babonisa ngqo okanye ngokuthe ngqo kunxibelelwano oluvela e-China, South Korea, Japan, Iran, Italy, Hong Kong, Macau, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Nepal, Thailand, Singapore naseTaiwan kufuneka babe namava ezonyango. Ukuhlola kwizibuko lokungena eIndiya.
Ukuhlaziywa-4 kwe-Matshi 2020
Ingcebiso malunga nokuhamba kwezempilo e-India
Zonke iiVisa eziqhelekileyo kunye ne-e-Visa (kubandakanya iVisa ekufikeni kweJapan kunye noMzantsi Korea) zinikwe abemi base-Italiya, i-Iran, iSouth Korea, iJapan kwaye bakhutshwa ngomhla okanye phambi kuka-Matshi 3 nabangekangeni e-India, bema bumisiwe kwangoko .
I-Visa yesiqhelo kunye ne-e-Visa enikwa bonke abemi belizwe abaya kwiPeoples Republic of China, Iran, Italy, South Korea naseJapan ngomhla okanye emva kwenyanga kaFebruwari 1, nabangekangeni eIndiya beme ngenkani.
Iinkcukacha-manani- iIndiya inamatyala ayi-6 ewonke apho ama-3 sele efunyenwe.
Ngeli xesha iNkulumbuso yase-India u-Narendra Modi ucebisile ukuba angoyiki kwaye kubekho uphononongo olubanzi lokulungela kweCoronavirus.
Uhlaziyo-27 kweyoMdumba ngo-2020
ICoronavirus iyalawuleka. Isasasazeka ngaphandle kwe China. Abaphethe iVisa yabakhenkethi baseIndiya kunye nabanini beVisa yaseIndiya bakhuselekile ukuba bangahamba kweli. Ukuhlaziywa kwe-26th kaFebruwari 2020 nguMbutho wezeMpilo weHlabathi ubhengeze i-India njengelizwe elikhuselekileyo lokuhamba. Ukuba ubukhe watyelela e-China kutshanje, emva koko usenokubuzwa malunga nayo ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo se-Indian Visa Online (eVisa India).
Uhlaziyo-14 kweyoMdumba ngo-2020
Ukwenzela ukukhusela i-India kuyo nayiphi na impembelelo kubakhenkethi okanye kubemi bendawo, URhulumente wase-India ubhengezile Ukucinywa kwe-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi (eVisa India) yeendwendwe zaseTshayina. Kukho amazwe angama-24 apheleleyo ngaphandle kwe China abhalise iimeko zeCoronavirus.
Kwakukho amatyala amathathu kuphela e-coronavirus yabagibeli baseIndiya ababevela kumazantsi eKerala. URhulumente wase-India uthathe amanyathelo angqongqo, wabanqanda kwinqanawa yokuhamba ngenqanawa yedayimani. Zonke ezi zinto ziphinde zafunyanwa kwaye zahlaliswa zodwa iintsuku ezili-14 ekhaya.
URhulumente wase-Indiya uthathe amanyathelo afanelekileyo okususa amaIndiya angama-600 ahlala e-Coronavirus, e Wuhan-China e China. Imeko yabo ijongiwe kwiziseko zemihla ngemihla kwaye abahlali abangama-600 badibanisa ne-Indiya abavela e-China bahlaliswa bodwa kwiziko leenkonzo zonyango i-India.
Urhulumente wase-India uthathe amanyathelo okusebenza kuzo zonke izikhululo zeenqwelo-moya zokuvalelwa kwakhe namphi na umhambi ebonisa iimpawu zomkhuhlane.
Amaziko okuvavanywa kweLab eC Coronavirus eIndiya nase China China Bound Advisory
IBhunga laseIndiya loPhando lwezoNyango liseke indawo zokuvavanya i-Coronavirus kulo lonke ilizwe. Abakhenkethi bayacetyiswa ukuba bangatyeleli e-China ukunqanda ukusasazeka kwezifo. Akukho phantse i-coronavirus eIndiya.
Iindwendwe ezisuka eChina zisiya eIndiya AZIVUMELEKILE kwaye nokuba abo bakhweli bafaka isicelo sephepha elibonakalayo iVisa yokuya eIndiya okanye eVisa India (ngeVisa yaseIndiya yeVisa ekwi-Intanethi) inqunyanyisiwe kwaye irhoxisiwe kubahlali base China.
I-Visa yaseIndiya, akukho Coronavirus eIndiya
Iindwendwe ziyathontelana ukuya eIndiya ngenxa yokhuseleko xa kuthelekiswa nezinye iindawo zabakhenkethi ezinjengeOstreliya, iIndonesia, iThailand, iVietnam neJapan ezinamatyala asebenzayo nakonyukayo e-coronavirus. Ngenxa yokhuseleko lwayo, amanyathelo athathwe kakuhle, ukubandakanyeka kukarhulumente kunye nokusebenzisana kwezikhululo zeenqwelo moya kunye nemibutho yezokhenketho akukho matyala e-coronavirus e-India. I-Indiya yiyo ilizwe elilungiselelwe kakhulu nelilungele ukujongana naluphi na ugqabhuko-dubulo lwe-coronavirus. Abakhenkethi bakhuseleke kakhulu eIndiya ngeli xesha lokhenketho.
Singathanda ukukwamkela eIndiya kwaye nangayo nayiphi na ingcaciso engaphezulu onxibelelana nathi IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya.
Ungajonga ukufaneleka kokufaka isicelo kule webhusayithi, kubemi bamazwe angaphezu kwe-180 angenza isicelo Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya kwi-intanethi.